काठमाडौं- पोखरा रुटमा , प्लनेको टिकट बसभन्दा पनि सस्तो ! – Life Nepali
काठमाडौं- पोखरा रुटमा , प्लनेको टिकट बसभन्दा पनि सस्तो !
काठमाडौं, २०७६ चैत्र ०६ गते । पर्यटकीय, नगरी पोखरामा, स्वदेशी, मात्रै होइन विदेशी, पर्यटकको पनि उत्तिकै आकर्षणको गन्तव्य, हो । पोखराको, सुन्दरता, नियाल्न, हरेक दिन पर्यटकको, घुँइचो लाग्ने पोखरा, यतिबेला, सुनसान छ । चीनबाट, फैलिएको, कोरोना, भाइरसको, संक्रमण, १४५ भन्दा बढी देशमा, फैलिएपछि, त्यसको, असर, अहिले पोखरामा देखिएको छ । जसले, गर्दा काठमाडौं– पोखरा रुटमा, उडान, हुने विमान कम्पनीले हवाई, भाडा, सस्तो, बनाएका छन् ।
यतिसम्म कि काठमाडौं–पोखरा रुटमा, चल्ने लक्जरी बसभन्दा हवाई भाडा सस्तो भएको छ । यो रुटमा, चल्ने लक्जरीले २ हजार रुपैयाँसम्म, टिकट, वापत पैसा, लिन्छन् । तर विमान कम्पनीहरुले, १७ सयदेखि नै टिकट, बिक्री गर्न थालेका, छन् । कोरोना भाइरसका कारण, यात्रुको, संख्यामा उल्लेख्य कमी, आएपछि, विमान कम्पनीहरुले सस्ता दरमा टिकट बिक्री गरिरहेका हुन् । अनलाइनमा, टिकट हेर्ने हो, भने पोखराका लागि १७२० रुपैयाँदेखि, २ हजार रुपैयाँमा सस्तो, दरका टिकट उपलब्ध, भइरहेका छन् ।
बसमा यात्रा गर्दा एकातिर, दिनभरी समय लाग्ने तर हवाई, यात्रामा २५ मिनेटको दूरीमा तय गर्न, सकिने यो, रुटमा यात्रुको संख्यामा कमी आउँदा पोखरामा पर्यटक व्यवसायमा नराम्रो असर परेको छ । पोखराको, आकर्षण मानिने प्याराग्लाइडिङ, व्यवसाय यतिबेला, संकटमा, पर्न थालेको छ, । प्याराग्लाइडिङ एसोसिएसनका महासचिव शैलेन्द्र रावतका अनुसार अहिले पर्यटकको, संख्यामा कमी, आउँदा घर भाडा, बैंकको ब्याज र कर्मचारीको, तलब दिन समेत, गाह्रो, अवस्था, आइसकेको छ ।त्यस्तै, पोखराका होटलको अकुपेन्सी पनि निकै तल झरेको छ, भने पसल, रेष्टुराँको व्यवसाय, पनि, ठप्प जस्तै भएको छ ।
Previous कोरोना भाइरस प्रकोप : कोरोनाबाट ब’च्‍न भारतीय नागरिक विमान चढेर धमाधम नेपाल आउँदै”
Next कोराना-भाइरसको डरले एकै दिन ९० हजार मानिसले काठमाण्डौ छोडेर आफ्नै घर फर्किए !